BBC SOMAL – My WordPress Blog
28ka Nov. oo loo Qabtay Doorashada K. Galbeed
Maanta waa 17-ka Novembar, waana maalintii loo muddeeyay inay qabsoonto doorashada maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya. Hase ahaatee doorashadaasi ayaa dib u dhacday muddo laba todobaad ah, waxaana lagu wadaa inay qabsoonto 28ka bishan.
Dhinaca kale, Xildhibaanada Baarlamaanka Koofurgalbeed ayaa maanta cod gacan taag ah ku ansixiyeen xubno lagu dhameystirayey Guddiga Doorashada Madaxweynaha Koofurgalbeed, oo xubno horey isu casileen.
Wariyaha VOAda Muqtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadaneynaa qubanayaal kala duwan oo ku saabsan siyaasadda Somalia, waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan
Waaxda sirddoonka Mareykanka oo ku eedeeysay dilka Kaashugji Maxamed Bin Salmaan
Dadka dhaliila waxay aaminsan yihiin in dhaxal sugaha uu dilka wax ka ogaa
Waaxda sirddoonka Mareykanka ee CIA ayaa rumaysan in dhaxal sugaha Maxamed Bin Salmaan uu kasoo baxay amarka lagu dilay weriye Jamaal Kaashugji, sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka.
illo wareedyo ku dhaw waaxdan ayaa faahfaahin ka bixiyay qiimaynta lagu sameeyay caddeymaha la hayo.
Waxay sheegeen inaysan garaneynin cidda dambiga gaysatay balse ay filayaan in howlgalka noocaasi ah ee lagu dilay Jamaal uu ahaa mid isaga uu qalinka ku duugay.
Shir jaraa’id oo uu Khamiistii ku qabtay magaalada Riyaad ayuu ku sheegay ku xigeenka dacwad oogaha, Shalaan bin Rajih Shalaan, in Meydka Khaashuqji lagu dhex jarjaray qunsuliyadda markii uu dhintay.
Dhaxal Sugaha Sacuudiga ayaa la kulmay wiilka Khashogg, ee Saalax
Hilbihii ayaa loogu dhiibay qof “shaqaale” maxalli ah, meel dibadda ah. Sawir gacmeedka qofka shaqaalaha ah ayaa la sameeyey, waxaana socda baadigoob lagu hayo halka hilbihiisa laga heli karo.
Trump: dilka Khaashuqji waxaa loo qariyey “si aan taariikhda horay loogu arag”
“Khaashuqji ayaa lagu duray cirbad sun ah, ka dib markii uu gacan ka hadal ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, 2dii Oktoobar” ayuu ku sii daray.
2 Oktoobar ayey ahayd markii ugu dambaysay ee la arko Khaashuqji
Dowladda Sucuudiga waxay beenisay eedeymaha ah in Maxamed Bin Salmaan uu wax ka ogaa qorshaha lagu dilay Kaashugji.
Weriye Jamaal Kaashugji ayaa 2-dii bishii Oktoobar lagu dilaya gudaha qunsuliyadda Istanbul, ilaa iyo haataan meydkiisa lama helin.
Turkiga wuxuu ku adkeysanayaa in amarka lagu dilay Kaashugji uu kasoo baxay taliska ugu sarreyo Sucuudiga.
Waxaa dalka Sucuudiga ka socdaa Salaatul qaa’ib lagu tukanayo maydka Jamaal Kashuugji.
Sawir hore: Xayeeysiinta dhaqaatiirada oo la mamnuucay
Dhakhaatiirta Sacuudiga oo “ku qancay” caafimaadka xoolaha Somaliland
Dad badan oo ka soo qayb galay salaadda janaasada oo loogu dukanayey Khashuqji masaajid ku yaallo Istanbul
Saalax jamaal oo ah wiil uu dhalay Khaashuqji ayaa ka qayb galay munaasabad aabbihii loogu duceynayey oo lagu qabtay magaalada Jiddah. Sida oo kale dad boqollaal ah ayaa ka soo qayb galay salaadda janaasada qaai’ibka oo Khashuqji looga tukaday Meka, Madiina iyo Istanbul.
Dad badan oo ka soo qayb galay munaasabadda looga duceeynayey Khaashuqji oo Istanbul lagu qabtay
Imaam dadka tujinaya salaadda qaa’ibka ee Khaashuqji Istanbul looga dukaday
Saalax Khaashuqji oo qaabilay dadka uga tacsiyadeynaya geerida aabbihii
Saalax wuxuu intaa raaciyey “waxaan dooneynaa inaan aabbahey si sharaf iyo maamuus leh u aaso”.
Gabadha uu Khaashuqji guursan lahaa Hatice Cengiz, mar sii horreysay waxay BBC-da u sheegtay waayitaanka Jamaal Khaashuqji iney uur ku taallo ku abuurtay “xitaa ay ismacasalaameynin marki ay kala tageen ee isugu dambeysay” ilaa iyo haddana dhimashadiisa ay u qaadan la’dahay.
Waxayna intaa raacisay “haddii uu qof dhinta dhimashadiisa waxaad kaga sabreysaa meydkiisa oo aad aragto oo aad aasato” balse taa ma dhicin.
Gabadha uu guursan lahaa Khaashuqji: “xitaa isma macasalaameynin”
Arrintani ayaa waxay imaneysa maalma un kaddib marki uu magaalada Riyaad uu shir Jaraa’id ku qabtay ku xigeenka dacwad oogaha Sacuudi Carabiya , Shalaan bin Rajih Shalaan, uuna sheegay in Meydka Khaashuqji lagu dhex jarjaray qunsuliyadda Istanbul markii uu dhintay.
“Khaashuqji ayaa lagu duray cirbad sun ah, kadib markii uu gacan ka hadal ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, 2dii Oktoobar” ayuu ku sii daray.
Ku xigeenka dacwad oogaha Shalaan bin Rajih Shalaan,
Amir Maxamed, wiilka boqor Salmaanka Sacuudiga, ahna ninka la aaminsan yahay inuu Sacuudiga xukumo, ayaa beeniyey inuu wax lug ah ku lahaa “dilka naxariis darrada ah oo aan sinnaba qiilka loogu samayn karin” ee loo geystay Wariye jamal Khaashuqji.
Ra'isal Wasaaraha Ingiriiska oo xisbigeedu doonayo in codka kalsoonida loo qaado
Xubnaha hormuudka u ah in Ingiriisku ka baxo Midowga Yurub ee ku jira golaha wasiirada ayaa taageero la garab joogsaday Theresa May, iyada oo ay socdaan isku dayo lagu doonayo in xilka lagaga qaado.
Golaha wasiirada Britain oo taageeray heshiis ka bixitaanka UK ee Midowga Yurub
Midowga Yurub oo ka soo horjeesatay qorshaha Theresa ee ka bixitaanka Yurub
Waxay xustay in go’aankan uu yahay khiyar adag gaar ahaan marka ay timado arrinta xuduuda waqooyiga Ireland.
Midowga Yurub oo ku kala qaybsan arrinta muhaajiriinta
Mrs May ayaa lagu wadaa in maanta oo khamiis ah ay hadal ka jeediso baarlamaanka dalka Britain.
Midowga Yurub oo ka fiirsanaya xiriirka uu laleeyahay Tanzania
Midowga Yurub ayaa dib u eegis ballaaran ku samaynaya siyaasadihiisa ku aaddan dalka Tanzania sababo la xiriira wax uu Midowgaasi ku tilmaantay “Xuquuqda aadanaha iyo sarraysta Sharciga oo sii xumaanaya”.
Bilihii u dambeeyey, waxaa hoggaanka madaxweyne John Magufuli soo foodsaaray eedaymo gudaha ah iyo kuwo caalami ah oo la xiriira cabburinta mucaaradka iyo afqabashada xorriyadda hadalka.
Tallaabadan ugu dambaysay ee ay qaadeen deeq bixiyeyaasha reer galbeedku ee ay uga golleeyihiin inay si qoto dheer u qiimeeyaan xiriirka ay la leeyihiin Tanzania la yaab kuma noqoneyso madaxweyne Magufuli.
Horaantii bishan, Midowga Yurub ayaa u yeertay ergaygeeda Tanzania, taas oo ay uga jawaabayso ugaarsiga lagu hayo dadka isku jinsiga ah ee is guursada. Isniintii, Baanka Adduunka ayaa ka laabtay dayn waxbarasho oo gaaraysa $300 oo milyan oo Tanzania la siin lahaa, sababo la xiriira siyaasadda lagu muransan yahay ee ay Tanzania gabdhaha da`da yar ugu diidday inay iskuulka ku laabtaan marka ay dhalaan kaddib.
Maalintii shalay ahayd, Denmark, oo ka mid ah dayn bixiyeyaasha ugu waaweyn ee Tanzania daymaha siiya ayaa ku dhawaaqday inay joojisay $9.8m oo gargaar ah oo ay siin lahayd Tanzania.
Xiriirka gurracan ee u dhaxeeya Tanzania iyo diblumaasiyiinta ayaa u muuqda inuu meel xun gaaray, kaddib markii Paul Makonda oo saaxiib dhow la ah madaxweyne Magufuli, isla markaana ah duqa magaalada caasimadda ah ee Dar es Salam uu sheegay inuu u xil saari doono koox ugaarsata dadka isku jinsiga ah ee is guursada.
Dowladda ayaa sheegtay in Makonda uu fekerkiisa cabirayay, taas oo aan ku salaysnayn siyaasadda dowladda.
Tallaabooyinkii adkaa ee uu Magufuli uga hortagayay musuqmaasuqa sanadkii 2015 markuu talada dalkaas qabtay ayaa soo jiidatay indhaha caalamka, balse dadka wax falanqeeya ayaa ku doodaya in dulqaad la`aanta uu u hayo mucaaradka iyo warbaahinta ay carqaladayn karto kalsoonida ay reer galbeedku ku qabaan maamulkiisa.
Dagaalkan u dhaxeeya Magufuli iyo beesha caalamka ayaa dharbaaxo kulul ku ah dhaqaalaha Tanzania, iyadoo ku dhowaad kala bar qorshe maaliyadeedka dalkaas uu ka yimaado gargaar dibadda uga yimaada.
Barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan waxa uu oo ku saabsan yahay sanad ka dib markii la doortay madaxweyne Muuse Biixi, hormar iyo dib u dhac wixii ku yimid maamulka Somaliland. Waxaa soo jeedineysaa Sahra Ciidle Nuur.